Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) - Hello Sayarwon
Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး )
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး )
Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Homatropine အစက်ချဆေး သည် Acetylcholine ကိုပိတ်သောဆေးဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပိတ်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်လုံးရှိ အာရုံကြောမျှင်များကို ပြေလျော့သွားစေပြီး သူငယ်အိမ်ကို ကျယ်သွားစေပါသည်။
Homatropine အစက်ချဆေး ကို အများအားဖြင့် မျက်စိ သူငယ်အိမ်ကိုစစ်ဆေးရာတွင် သို့မဟုတ် မျက်လုံးရောင်ခြင်း ပြသနာများကို ကုသရာတွင် သူငယ်အိမ်ကျယ်စေရန် အသုံးပြုပါသည်။
Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးကို ဆေးဘူးပေါ်တွင် ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်း သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
မျက်စဉ်းဆေးကို အသုံးမပြုမီ လက်နှစ်ဖက်ကို သေချာစွာဆေးပါ။ ခေါင်းကို အနောက်ဖက်သို့ လှန်ထားပါ။ သင့်လက်ညှိုးဖြင့် အောက်မျက်ခမ်းကို ဆွဲချပါ။ ထို့နောက် အောက်ဖက် မျက်အိတ်အတွင်းသို့ ဆေးကို အစက်ချပါ။
ထို့နောက် အပြင်ဘက်မှနေပြီး သင့်လက်ချောင်းဖြင့် မျက်လုံးကို အပြင်ဘက်မှ ဖိပြီးမျက်ခွံအတွင်းပိုင်းသို့ ၁- ၂မိနစ်ခန့်တွန်းထားပါ။ မျက်တောင်မခတ်ပါနှင့်။ သင့်မျက်လုံဘေးတွင် ပေနေသောဆေးရည်များကို တစ်သျူးဖြင့် သုတ်လိုက်ပါ။ မျက်လုံးကို မထိမိစေရန် သတိပြုပါ။ သင့်လက်များကိုလည်း မထိမိစေရန် သတိပြုပါ။
Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Homatropine အစက်ချဆေး ကို အခန်းအပူချိန် မှာသိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Homatropine အစက်ချဆေး ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Homatropine အစက်ချဆေး ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Homatropine အစက်ချဆေး ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Homatropine အစက်ချဆေး ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ
Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Homatropine အစက်ချဆေး ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
သင့်တွင် မျက်လုံးရေတိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အခြေအနေများ ရှိလျှင်
Homatropine အစက်ချဆေးကို မြိုချမိလျှင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုဆေး ပါးစပ်ထဲသို့ဝင်သွားခြင်းများရှိပါက အဆိပ်ဖြေဆေးဌာန သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ဌာနသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
Homatropine အစက်ချဆေးသည် မျက်လုံးများကို ဝါးစေနိုင်သောကြောင့် သတိနှင့် အသုံးပြုရပါမည်။ ထိုဆေး၏အာနိသင်တုန့်ပြန်မှုကို မသိပါဘဲနှင့် ကားမောင်းခြင်း၊ အရေးကြီးသော တာဝန်များထမ်းဆောင်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပါ။
Homatropine အစက်ချဆေးသည် မျက်လုံးကို နေရောင်နှင့် ထိလျှင် မခံနိုင်ဖြစ်စေသောကြောင့် နေကာမျက်မှန်ကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်။
Homatropine အစက်ချဆေးကို သုံးနေစဉ် မျက်လုံးကို စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် ရက်ချိန်းမှန်မှန်ပြပြီး ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
Homatropine အစက်ချဆေးသည် အသက်ကြီးသူများ၊ နှင့်ကလေးများတွင် စိတ်ချရမှုရှိမရှိ သေချာစွာ မသိရသေးသည့်အတွက် သတိနှင့် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါတို့သည် အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ မခံမရပ်နိုင်အောင် ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မျက်စိ တွင် ပူခြင်း၊ စပ်ခြင်း၊ ယားခြင်း
အစက်ချဆေးနှင့် ထိသောနေရာများတွင် နီရဲလာခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း
အရေပြား နီရဲခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း
နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်ခြင်း၊ နှေးခြင်း
ကောင်းမွန်စွာ မတ်တပ်မရပ်နိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Homatropine အစက်ချဆေး ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အထူးသဖြင့် ဟစ်စတာမင်း ဆန့်ကျင်ဆေးများ(diphenhydramine)၊ ပါကင်ဆန် အကြောဆိုင်းရောဂါသောက်ဆေးများ (benztropine)နှင့် စိတ်ကျရောဂါ သောက်ဆေးများ( amitriptyline)သည် Homatropine အစက်ချဆေး ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Homatropine အစက်ချဆေး က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Homatropine အစက်ချဆေး ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
ဒေါင်းရောဂါစု စသည့်ကျန်းမာရေးပြသနာများရှိလျှင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
မျက်စိ သူငယ်အိမ်ကျယ်ခြင်းနှင့် သူငယ်အိမ်စောင်းခြင်း
ဖြစ်သော မျက်စိကို 2% သို့မဟုတ် 5% မျက်စဉ်းဆေးကို ၁စက် ၂စက် ခတ်ပေးပါ။ ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်ခြားလျှင် လိုအပ်ပါက ထပ်ခတ်ပါ။
ဖစ်သော မျက်စိကို 2% သို့မဟုတ် 5% မျက်စဉ်းဆေးကို ၁စက် ၂စက် ခတ်ပေးပါ။ ၃ နာရီ ၄ နာရီခြားလျှင် လိုအပ်ပါက ထပ်ခတ်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Homatropine Drops (ဟိုမထရိုပင်း အစက်ချဆေး ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Homatropine အစက်ချဆေး ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Homatropine အစက်ချဆေး 2% မျက်စဉ်းဆေးရည်
Homatropine အစက်ချဆေး 5% မျက်စဉ်းဆေးရည်
Homatropine အစက်ချဆေး ကိုသုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Homatropine Drops. https://www.drugs.com/ppa/homatropine-hydrobromide.html. Accessed December 8, 2016
Homatropine drops. https://www.drugs.com/cdi/homatropine-drops.html. Accessed December 8, 2016.